mirehareha Wallpaper — Trip LEE - OFISIALY SITE
Mila fampahatsiahivana isan'andro fa ianao naorina mba mirehareha? Izahay efa atambatra vitsivitsy ny wallpapers ho an'ny finday, takelaka, na ny biraonao. Misy safidy tsotra telo eto ambany ny mirehareha famantarana. Betsaka kokoa ny ho avy taty aoriana. Ankafizo!
David • Aprily 9, 2014 amin'ny 2:52 PM • navalin'i
Misaotra ny maimaim-poana Downloads. Ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fianakavianao sy ny asa fanompoana.
Enane † • Aprily 12, 2014 amin'ny 5:04 PM • navalin'i
Misaotra ny ny wallpapers Bro. Tiavo izy ireo. Misy dikany lehibe lavitra ho azy ireo noho ny hirehareha, fa hirehareha ny Iray Marina King, Jesosy. Stay voatahy. †
Lee • Aprily 16, 2014 amin'ny 5:45 PM • navalin'i
Misaotra ny temotra. Dia miandrandra any amin anao sy mijery ny hetsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsara ny toy izany romodel
Bolt • Jona 9, 2014 amin'ny 12:54 PM • navalin'i
I gotta milaza Trip, Tena sambatra aho isaky hihaino anao aho, aoka ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny you'r hamirapiratra ny fiainana sy ny fianakavianao ny forver. Mila ny zanakao no lazaiko dia iray amin'ireo luckiest amin'ny tany an-tany. Ary ny azo antoka fa tsy milina. #116 #rhemaprocess @iamslizybolt
Pamela • Aogositra 29, 2014 amin'ny 5:59 PM • navalin'i
Misaotra anao Trip. Ny teny tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izy ireo, fa manampy ahy foana ny mifantoka amin'ny fifandraisana Aminy. Fitiavana be.
Chris • Septambra 12, 2014 amin'ny 4:43 PM • navalin'i
Hey Bro, lehibe mpankafy, hotahian'andriamanitra anie ianao. Izahay dia tena iray ao amin'i Kristy.
irenesalcedo • Septambra 23, 2014 amin'ny 4:52 PM • navalin'i
No anarako Irene Salcedo, I manompo ao Etazonia tafika ary izaho anilan'ny Fort Bliss, TX. Izaho dia iray amin'ny lehibe indrindra fans.This taona ny reniko dia voan'ny dingana 4 Lymphoma Cancer. Ary rehefa hanakona voalohany, ny dokotera dia nilaza fa amin'ny sehatra 2, ary nanomboka Chemo mitondra azy ho dingana roa. Vao haingana dia nampitaha ny vokatry ny fitiliana voalohany, izay hoy izy ireo dia sehatra 2, Tena ny sehatra 4. Izany dia ny fahadisoany. Ny reniko dia mbola hoe entina ho dingana 4 ary mbola mandalo chemo. Raha vao chemo no ho izy dia tsy maintsy manomboka taratra, ary tsy afaka ny ho manodidina azy ho an'ny fety. Izay rehetra mangataka aminareo ry zalahy, dia ny mivavaka ho azy ara-pahasalamana. Izy dia mpanompon'Andriamanitra sy nampiseho ny sibilings sy ny tenako ny lalan 'ny Tompo. Ary isan'andro dia mampahatsiahy antsika fa Andriamanitra dia ao Control, Manontany fotsiny aho fa hiaro azy fotsiny ao amin'ny vavaka, Ny anarany Yvonne Castro.
In ny Light
Julia nifindra • Oktobra 14, 2014 amin'ny 9:38 aho • navalin'i
Mila rehetra dia 1:16 mba hirehareha eo an-tanako Tompo, mirehareha eo an-tanako Malagasy. Miresaha momba ny 'im isan'andro cuz Izy mitantana izany zavatra izany! Misaotra ny temotra, Trip!
mifidy • Desambra 6, 2014 amin'ny 4:49 aho • navalin'i
thankz lehibeny, ankehitriny ry dextop lafika mirehareha mijery….